जसले झोलामा मुटु बोकेर हिँडिरहेकी छिन्, रोचक छ उनको जीवन कहानी
संसारमा कहिले काँही प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने घटना हुन्छन् । तस्बिरमा देखिएकी खुशी हसिली महिला सलवा हुसेन एक त्यस्तै महिला हुन । उनले प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएकी छन् । उनी मुटु नभएकी संसारकी एक मात्र
काठमाण्डौ । माछाको रक्षा नाग नागीनले गरेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । त्यो पनि नेपालमै । काठमाण्डौबाट झण्डै २ किलोमिटर पर चोभार भनिने ठाउँमा एउटा यस्तो पोखरी
पर्सा । २९ वर्षदेखि महिलाको भेषमा नाच्ने गाउने एउटा पुरुष । जो जीवनमा पुरुष भन्दा महिलाको अवतारमा बढ्ता देखिए । नाच्ने गाउने काम नै पेसा बनाएका झण्डै ४५ वर्षका छोटेलाल पासवान विस्तारै महिलाको भेषमै रमाउन
सुन्दै पत्यार नलाग्ने तर सत्य, प्रेमसम्बन्धमा रहँदै आएका यि जोडी कुकुरको गरियो धुमधामले विबाह, जन्ती मात्रै थिए ३५० जना
काठमाडौ । हामिले मानिसको विवाह त सुनेकै छौ र देखेका पनि छौ तर अस्ट्रेलियामा महंगो पहिरनमा कुकुरको विवाह गरिएको छ । सुन्दा पनि अनौठौ लाग्ने अस्ट्रेलियाको मेलवर्न शहरमा हालै एक कुकुरको धुमधामसंग विवाह भएको छ
सन्तानको खुशीको लागि आँफुलाई नै बेच्ने हिम्मत गर्ने यि हुन् महान् आमा, बनिन् विश्वचर्चित
काठमाडौ - आफ्नो संतानको खुशीको लागि एउटी आमाले जस्तो सुकै पनि परिस्थितिसंग लड्न तयार हुन्छन् । त्यस्तै उदाहरण हैम्पशायरमा देखिएको छ । एउटी आमाले छोरा छोरीको लागि आफैलाई बेच्न बाध्य भएकी छिन् । उनले आफ्नो
काठमाडौँ । हालै सामाजिक संजालमा केहि तस्विर भाइरल भएका छन् । चीनको चेग्टु शहरमा हालै एक अनौठो घटना घटेको छ । एक युवतिले औठी सानो भएको भन्दै बिवाह ताडेकी छिन् । उक्त युवतिका बिवाह गर्ने
काठमाडौँ – वास्तवमा भन्नुपर्दा, ‘सपना’ भनेको हाम्रो अवचेतन मनमा भएका कुराहरूलाई हामीसामुन्ने देखाउने श्रोत हो भन्न सकिन्छ। हरेक संस्कृतिले ‘सपना’लाई भिन्नाभिन्नै दृश्टिकोणले हेर्ने गर्दछ भने हरेकले आफ्नै तरिकाले सपनालाई व्याख्या गर्ने गर्दछ। कसैले सपनालाई मानिसको
काठमाडौँ । हिम उल्लूको दुर्लभ तस्वीर यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ । १३० बर्षपछि पहिलो पटक न्यूयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा देखा परेसँगै उक्त तस्विर भाइएरल बनेको हो । न्यू योर्क शहर विभागको पार्क्स तथा रिक्रिएशनको सामाजिक सञ्जालमार्फत
चन्द्रमाको यात्रामा जान ईच्छुक आठजनाको खोजी गर्दै यि अर्बपति, तपाई पनि इच्छुक हो ?
काठमाडौँ । जापानका युसाका माएजावाले चन्द्रमाको यात्रा आफूसँग गर्नका लागि आठ सदस्यहरूको खोजी गरेका छन् . जापानका एक अर्बपति युसाका माएजावाले आफूसँग चन्द्रमाको यात्रा गर्नका लागि विश्वभरीबाट आठ जना सर्वसाधारणलाई आमन्त्रण गरेका छन्। उक्त यात्रा
कतारका लागि उडान भरेको विमानका चालकलाई बिरालोले आ क्र म ण गरेपछि विमान फरक दिशामा गयो
काठमाडौं। सुडानको राजधानी खार्तुमबाट उडेको विमानमा बिरालोले पाइलटलाई अचानक आ क्र मण गरेपछि विमानको आकस्मिक अवतरण गर्नुपरेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार बिरालोले अ नियन्त्रित भएर पाइलटमाथि नै आ क्र' मण गरेपछि विमानको आकस्मिक अवतरण